Si qoyska aan jeclahay iyo saaxiibada | Apg29
Ha rumaysan in shisheeyaha u yimid oo wuxuu noo qaatay. Waa run ma aha.
Waxaa wareegtaa "tegey warqado" USA. Warqad u soo dirto si ay kuwa ay jecel yihiin kuwaas oo aan dadka Masiixiyiinta ah si ay u helaan aqoonta maalmaha soo socda marka rayrayn ku dhici karaa. Waxaan helay warqad ka akhristaha ah oo lagu turjumay af Iswiidhish iyo af halkan oo waxaan ku daabici doonaa.
Si qoyska aan jeclahay iyo saaxiibada.
Macluumaadka aan u soo diri saabsan tahay rayrayn kaniisadda aan rumaysan oo dhan qalbigaygu waa dhow.
13. Laakiin waxaan ma uu doonaynin, walaalayaalow, inaad jaahil ka ku saabsan kuwii dhintay, si aydaan u murugoon sida kuwa kale oo aan rajo lahayn.
14. Waayo, haddaynu rumaysan nahay in Ciise dhintay oo haddana soo sara kacay, sidaas oo kale Ilaah la keeni doonaa kuwa kalaa kuwii Ciise isaga oo leh.
15. Waayo, tan waxaannu idiin sheegi ereyga Rabbiga, waannu ka kaas oo kuweenna nool oo hadha ilaa imaatinka Rabbiga, waxba waa ka hor inta kuwa dhintay iman.
16. Maxaa yeelay, Rabbiga qudhiisu samaduu kala soo degi doonaa qaylo amar leh, iyo codka malaa'igta sare iyo buunka call Ilaah, oo marka hore dhintay in Masiixa sara kici doonaa.
17. Haddaba, waxaan taas oo kuweenna nool oo hadha waa la soo wada iyaga la qaban doona daruuraha dhexdooda inaynu Rabbiga hawada kula kulanno ah. Oo sidaas daraaddeed mar walba waannu Rabbiga la jiri doonaan.
18 Sidaa darteed dhiiri hadalladan midkiinba midka kale kuwaas.
In mudo ah, in 1/40 ee labaad ah, kuwa dhiibay noloshooda oo helay Ciise Masiix oo Rabbiga ah Badbaadiyeheenna baabi'i doontaa dunidan ka, iyo this dhici doona waqti kasta. Sidee baad ku ogaan kartaa hubiyo in aad ku badbaado?
9. Waayo, haddaad afka ka qiratid in Ciise yahay Rabbiga iyo aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay, waxaa laguu badbaadi doontaa.
10. Wixii la iimaanka qalbiga waa xaqnimadiisa, oo laga qirtaa afka waa la badbaadin doonaa.
Tegista kaniisad, u adeega iyo wax wanaagsan idiin badbaadin doonaa sameeyo. ma Waxaad u badbaadiyey shuqullo wanaagsan, aadna ku badbaaddeen shuqullada wanaagsan aawadood. Si aad u noqoto a "qof wanaagsan" ma waxaad badbaadin. Waa in aad si shaqsi ah u aqbalaan Ciise sida aad ah Badbaadiyeheenna. Waxaa jira Qorniinka aad u badan on this. Qaar badan oo idinka mid ah ayaa maqlay oo ku saabsan rayrayn "qaadida" iyo qaar ka mid ah ayaa xitaa u maleeyey ama ku yidhi, "haddii ay dhacdo aan soo noqon doono oo u soo jeesan Masiix sida".
Ha ii sharaxo waxa uu ku saabsan yahay in ay ka dhacaan mustaqbalka dhow. Inkasta oo Kitaabka Quduuska ah ayaa sheegay in garan mayno maalinta ama saacadda, waxaa iska cad in aan aqoonsado xilli Oo innaguna waxaynu nahay in daqiiqado ugu dambeeya dhamaadka maalmahan. Soon, rumaystayaasha dhabta ah ayaa laga soo qabtay "kor".
Bal qiyaas, haddaad doonaysid, in malaayiin ama xitaa a bilyan oo qof baaba'aan ka wejiga dhulka. Shil Diyaaradeed, shilalka baabuurta, dhammaan haweenka uurka leh mar dambe uurka leh, sababtoo ah caruurta ay uurka ku jira waxaa la dhufsaday fowdo aad u badan.
Marka ay tani dhacdo, waxaad garanaysaan in "rayrayn" ayaa ka dhacay oo aad ka soo tageen. Ha rumaysan in shisheeyaha u yimid oo wuxuu noo qaatay. Waa run ma aha.
Laakiin waxaa weli rajo. First ... Ha qaadan ogeysiis kasta oo nooc kasta on your foodda ama gacanta ku aan loo eegayn waxa. Haddii aad samayn, oo aan la idin korinay karaa oo waxaa laga badiyay weligiis.
Haddaba waxyaalahan oo iska tegi doonaa. Ka gees ah ayaa iman doona masraxa iyo iska dhigaya inay wanaagsan loogu caawiyo wax kasta oo xaq mar kale si ay u noqon. Wuxuu xaqiijin doonaa heshiis nabdeen reer binu Israa'iil ah, oo waxaa jiri doona nabadda adduunka waqti gaaban. Waxa ay noqon doontaa khiyaamo weyn oo sannado saddex iyo badh ka hor dhibaatadii weynayd ee saddex sano iyo badh. Oo dhan dhib toddoba sano ... waxa ay noqon doontaa xun.
Aad u dhiibtaa nolosha Ciise Masiix hadda. Isaga aqbalaan sida aad Rabbiga ah Badbaadiyeheenna. Kanu waa rajada keliya. Nasiib darro, waxaa dhici karta inaad doonaa la gooyay, haddii ay aad u qabsado, laakiin waa in aad diido in aad qaadato sumaddii bahalka ah, ama wax kasta oo aad waaridda Bixin doonaan cadaabta. Tani waa mid aad u halis ah.
Gees fulin doonaa si caalami ah iyo sumaddii bahalka. ma awoodi doontid inaad si gato ama la iibsado oo aan iin this. Waxaan aad u aaminsanahay in brand si fiican laga yaabaa in chips RFID wejiga ama gacanta midig, ama tattoo ah nooc kasta oo aan la dhaqaajin karin. Waxa kale oo aan aaminsanahay in wax laga beddelo doonaa DNA. Sida dad waaweyn, Beelaha Malaa'igta dhacay iyo dumarka laga bilaabo Bilowgii cutubka lix beddeshay DNA. Mark bahalka la mid ah ku samayn doonaa.
Vatican waxay leedahay arooryadow mashruuca / xoqad Buur Graham ee Arizona halkaas oo ay soo sheegeen xiriir la sirdoonka shisheeye. Iyagu ma ay shisheeyaha. Waxaa jira shisheeyaha jirin. Waxay yihiin kuwa dhacay Malaa'igta.
Oo anigu waxaan qabaa waa xaalad adag oo uu sharaxayaa sababta Mu'miniinta tegi iyo shisheeyaha u maleeyeen kor u tusi doonaa oo wuxuu isu sharaxo in ay sirdoonka ka xoogbadan, ama noqon awowayaashayo iyo abuura iyo in ay lahaayeen in ay ka saarto kuwa la waayay, taas oo dadka Masiixiyiinta runta ah.
baadari ee hadda, Pope Francis, haddii aan nebigii beenta ahaa, runtii waa horseed ah. Sidaas ... dhakhsaha badan rayrayn dhici doonaa.
Ha sugin. Hel Ciise haatan. Haddii aadan samayn, waxaana laga badiyay xusuusan wixii aan wadaagno. Waan ku jeclahay, oo ka sii muhiimsan,
Ciise wuu idin jecel yahay oo ku dhintay idiin si aad u yeelan karaan nolosha weligeed ah. Haddii aad dareentid in aad waa laga tagi doonaa, si degdeg ah la hadal Ciise. Waxaad ma baxsan doono jahli, wuxuu dhulkii ku, ama dhimasho u iman doontaa, laakiin waxaad dhaxli doonaa nolosha weligeed ah.
Haddii aadan ku aqbalo Ciise iyo dhiman, kuwo waara ee gani doonaa Haadees. Oo haddii aad qaadato sumaddii bahalka ah, aad weligiis Dhibka aan rajo. Waxaad waaridda Bixin doonaan cadaabta.
Waayo, haddaad afka ka qiratid in Ciise yahay Rabbiga iyo aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa.
Waayo, iimaanka qalbiga waa xaqnimadiisa, oo laga qirtaa afka waa la badbaadin doonaa.
Aaminsan in Ciise. Aqbalaan hadiyaddiisa free badbaadada. Weydii oo aad hesho Ciise hadda.
Weydii wax u eg:
"Ciise, waxaan ku ogaaday inaan ahay anigoo dembi leh. Waxaan aaminsanahay aad u dhintay dembiyadeenna my. Baan idiin aqbali sidii Badbaadiyahayga ah. In magaca Ciise, aamiin."
Waxaan weydiin barakadiisa korkiinna iyo in aad dhan u yimaadeen inay aqoonta ku badbaado Ciise.
Rajaynaynaa in aad la kulanto oo jannada ku jira.
Jacaylka in Kristus❣️
Tani waa email akhriste, kuwaas oo views tahay qoraaga ee u gaarka ah.